धेरै जसो आत्महत्या रोक्न सकिन्छ / कान्तिपुर दैनिक | Nepal Hypnosis PsychoSocial Care Center
काठमाडौ, भाद्र २६ - विश्व स्वास्थ्य संगठन(डव्लुएचओ)को आँकलन अनुसार वर्षेनी करिव १० लाख व्यक्ति वाह्य वा आन्तरिक कारणले आत्महत्या गर्छन् । एशियाली मुलुकमा अत्यधिक आवेशमा आउनु आत्महत्याको प्रमुख कारण हो । गत साढे चार दशकमा विश्वव्यापी रुपमा आत्महत्याको दर ६० प्रतिशतले बढेको छ । मनोचिकित्सकहरुका अनुसार, कुनै पनि व्यक्ति एककासी आत्महत्या गर्ने निधो गर्दैन । ती व्यक्तिको व्यवहारमा आएको परिवर्तनले यसको संकेत नजिकको व्यक्तिले पहिले नै पाउछ । यस्तो स्थितिमा नजि रहेकाहरुले सहानुभुती र सम्वेदनशीलताले ती व्यक्तिलाइ आत्महत्या गर्नबाट रोक्न सक्छन ।
डव्लुएचओको अनुसार भारतमा सरदर वर्षेनी सवा लाख भन्दा बढी व्यक्तिले आत्महत्या गर्ने गरे पनि नेपालमा भने तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । 'उपत्यकामा मात्र प्रत्येक साता करिव १० जना आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क राखिन्छ', त्रिवि शिक्षण अस्पताल मानसिक स्वास्थ्य विभागका प्रमुख डा.सरोजप्रसाद ओझा भन्छन्- 'आत्महत्यालाई अपराधको रुपमा लिने गरिएकोले मुलुकमा हुने आधा भन्दा बढी आत्महत्या वाहिर आउन पाउदैन ।'
आत्महत्या गर्ने व्यक्ति मानसिक रोगले ग्रस्त भएको कारण उनिहरुको उपचार आवश्यक छ । विकसित मुलुकमा आत्महत्यालाई जनस्वास्थ्य समस्या मानिए पनि हाल सम्म नेपाल लगायतका विकाशोन्मुख राष्टहरुले यसलाई जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा लिएको देखिदैन । आत्महत्या रोक्न सकिने भएकोले यो वारेको जनचेतना आवश्यक रहेको डा.ओझा बताउछन ।
मुलुकमा १५ देखि १९ वर्षका महिलाको मृत्यु हुने मुख्य कारणमध्ये आत्महत्या समेत रहेको डा. ओझा बताउँछन् । आत्महत्या गर्ने प्रकृत्ति स्विजोफ्रेनिया, मन आत्तिने रोग र रक्सी सेवन गर्नेमा बढी देखिएको छ । रक्सी सेवन गर्नेहरुमा अन्यको दाजोमा आत्महत्या गर्ने क्रम ३५ प्रतिसत सम्म बढता देखिएको उनि बताउँछन् ।
डब्लुएचओको अनुसार युरोप र उत्तरी अमेरिकामा मानसिक विकार मुख्य रुपमा डिप्रेसन र रक्सीको अम्मल आत्महत्याको जोखिमको कारक हो भने एशियाली मुलुकमा अत्यधिक आवेश आत्महत्याको प्रमुख कारण हो । आत्महत्यामा मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, जैविक, सांस्कृतिक र वातावरणिय कारक तत्वहरु संलग्न हुँदा यो जटिल हुन्छ ।
मुलुकमा आत्महत्याको प्रमुख कारणमध्ये मन धेरै उदास लाग्ने रोग, आवेशको अधिकता प्रमुख रहेको उल्लेख गर्दे डा.ओझा भन्छन-'यो दुवै लाइ रोकथाम गर्न सकिन्छ ।' मन धेरै उदास लाग्ने रोगको कुनै एउटा कारण हुँदैन, यो धेरै जसो थुप्रै कुराहरुको परिणाम हुन्छ ।
मुलुकमा वै भन्दा बढी आत्महत्या १५ देखी २९ वर्षको उमेर समुहमा देखिने गरिएको जनाउलै डा.ओझा पुरुषहरु झुण्डिएर मर्ने र महिलाहरुमा विष सेवन वा पानीमा डुव्ने प्रकृति बढी देखिएको वताउछन ।
डब्लुएचओको अनुसार सामाजिक र र राष्टिय स्तरमा आत्महत्याको लागि व्यापक रुपमा उपयोग गरिने वस्तु जस्तै विषादी, औषधि लगायतकाहरुमा आम व्यक्तिको पहच लाइ न्युन गरेर समेत आत्महत्याको जोखिम कम गर्न सकिन्छ । यस्तै आत्महत्याका प्रयास गरेकाहरुलाइ सहयोग गरेर मानसिक रुपले अस्वस्थ व्यक्तिलाइ उपचार गरेर समेत जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।
आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन शुरु
'सुसाईड प्रिभेन्सन हेल्पलाइन' मंगलवार 'विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवश' को उपलक्षयमा शुरु गरिएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल,मानसिक स्वास्थ्य विभाग प्रमुख डा.सरोज प्रसाद ओझाको अनुसार यस मार्फत आत्महत्यासग सम्बन्धित विभिन्न आयमहरुमा परामर्श, सहयोग, मित्रवत व्यवहार लगायतका सेवाहरु निःशुल्क रुपमा प्रदान गरेर आत्महत्याका घट्नाको न्यूनिकरणको साथै विशेषज्ञ सहयोग समेत प्रदान गरिने लक्ष लिइएको छ । यो हटलाईन डा. अरुणराज कुवर र डा. ओझाको पहलमा शुरु गरिएको जनाइएको छ ।
यस अन्तर्गत सेवा प्राप्त गर्नका लागि यसको हर्टलाईन ९८४००२१६०० मा फोन गरी जुन सुकै ठाउवाट सम्पर्क गर्न सकिनेछ । आत्महत्या गर्न खोज्ने व्यक्ति अथवा तिनको नजिकको मान्छे कसैले पनि फोन गरेको खण्डमा निजलाई आवश्यक परामर्श सेवा उपलब्ध गराइने छ । हटलाइन मार्फत आवश्यक परेको खण्डमा विशेषज्ञ सेवाको लागि समेत सुझाव दिइने छ । डा.ओझाका अनुसार सेवाग्राहीले फोन गर्दा निजको व्यक्तिगत गोपनियताको विशेष ध्यान दिइनेछ ।
डा. ओझाका अनुसार, यो सेवा २४ सै घण्टा प्राप्त गर्न सकिनेछ भने यस वापत कुनै पनि शुल्क लाग्ने छैन । सहयोग पछिको थप परामर्श सेवाको लागि मनचिकित्सक वा मनवैज्ञानिकको लागि भने स्थानीय शुल्क लाग्नेछ ।